I-Chili Piper: Uhlelo Lokusebenza Oluhleliwe Lokuguqulwa Kwangaphakathi Okuholela | Martech Zone
Ngizama ukukunikeza imali yami - kungani uyenza ibe nzima kangaka?
Lokhu kungumuzwa ojwayelekile kubathengi abaningi be-B2B. Kungu-2020 - kungani sisachitha isikhathi sabathengi bethu (kanye nesethu) ngezinqubo eziningi zasendulo?
Imihlangano kufanele ithathe imizuzwana ukubhuka, hhayi izinsuku.
Imicimbi kufanele ibe yezingxoxo ezizwakalayo, hhayi ukuphathwa yikhanda.
Ama-imeyili kufanele aphendulwe ngemizuzu, angalahleki ebhokisini lakho lokungenayo.
Konke ukuxhumana phakathi kohambo lomthengi kufanele kungabi nokushayisana.
I-Chili Piper isemishini yokwenza ukuthenga (nokuthengisa) kube buhlungu kakhulu. Sibheke ukufaka kabusha izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa amaqembu ethimba lezimali - ukwenza konke okuzondayo ngemihlangano, imicimbi, ne-imeyili - ukuze usebenzise isikhathi esiningi wenza isenzo.
Umphumela ukukhiqiza kakhulu, amazinga aphezulu wokuguqulwa, namadili avaliwe.
Okwamanje sinemigqa emithathu yomkhiqizo:
Ibhokisi lokungenayo likaChili
Imihlangano yeChili inikeza isisombululo esisheshayo, esibanzi kunazo zonke embonini yokuhlela ngokuzenzakalela nokuhambisa imihlangano kuzo zonke izigaba zempilo yamakhasimende.
Isimo 1: Ukuhlela ngemikhondo engenayo
Inkinga: Lapho okulindelwe kucela idemo kuwebhusayithi yakho basuke sebengama-60% ngenqubo yokuthenga futhi bakulungele ukuba nengxoxo enolwazi. Kepha isikhathi sokuphendula esimaphakathi ngamahora angama-48. Ngaleso sikhathi ithemba lakho selidlulele kumbangi wakho noma ukhohlwe ngenkinga yabo ngokuphelele. Kungakho ama-60% ezicelo zemihlangano engenayo angabhukwa.
Isixazululo: I-Concierge - ithuluzi lokuhlela elingaphakathi elifakiwe emihlanganweni yeChili. I-Concierge ishejuli eku-inthanethi ehlangana kalula nefomu lakho lewebhu elikhona. Lapho ifomu selithunyelwe, iConcierge ikufanelekela ukuhola, iyidlulisele kumthengisi oqondile wokuthengisa, futhi ibonise isheduli yokuzenzela ngokwakho elula yokubheka isikhathi - konke ngemizuzwana nje.
Isimo 2: Ukuhlela komuntu siqu nge-imeyili
Inkinga: Ukuhlela umhlangano nge-imeyili kuyinqubo ekhungathekisayo, ukuthatha ama-imeyili amaningi abuyela emuva naphambili ukuqinisekisa isikhathi. Ukwengeza abantu abaningi ku-equation kwenza kube nzima. Okungcono kakhulu, kuthatha izinsuku ukubhuka isikhathi. Okubi kakhulu, omenyiwe uyadela futhi umhlangano awusoze wenzeka.
Isixazululo: Instant Booker - imihlangano yabantu abaningi, ibibhukelwe nge-imeyili ngokuchofoza okukodwa. I-Instant Booker isandiso sokuhlela online (siyatholakala ngomhla ka- G Suite ne-Outlook) esebenzisa kabusha ukubhuka imihlangano ngokushesha nge-imeyili. Uma udinga ukuxhumanisa umhlangano, mane uthathe izikhathi ezimbalwa zomhlangano ezitholakalayo bese uzishumeka nge-imeyili kumuntu oyedwa noma abaningi. Noma imuphi umamukeli angachofoza esinye sezikhathi eziphakanyisiwe futhi wonke umuntu abhukhe. Chofoza okukodwa futhi yilokho.
Isimo 3: Ukuhlela izingcingo ze-handoff lead
Inkinga: Ukuhlela i-handoff (aka. Ukunikezwa, iziqu, njll.) Imihlangano inqubo yokubuyela emuva. Iphoyinti elijwayelekile phakathi kwe-SDR ne-AE (noma i-AE kuya ku-CSM) ngumhlangano obhukiwe. Kepha imithetho yokuhambisa ehola yenza kube inselele ukubuyela emuva emihlanganweni ngokushesha futhi kudinga amaspredishithi ezandla. Lokhu kubangela ukubambezeleka nokungaboniswa, kepha futhi kungeza ubungozi bokusatshalaliswa kokuhola okungafanele, izingqinamba zokusebenza, kanye nokuziphatha okuhle.
Isixazululo: I-Instant Booker - imihlangano yokubhuka ngesandla kusuka noma yikuphi ngemizuzwana. Isandiso sethu 'se-Instant Booker' sihlangana ne-Salesforce, i-Gmail, i-Outlook, i-Salesloft, nokuningi, ngakho-ke abasebenza kabusha bangabhuka imihlangano ukusuka noma ikuphi ngemizuzwana. Ukuhola kudluliswa ngokuzenzakalela kumnikazi ofanele ngakho-ke abaphindayo bangabhuka imihlangano yesandla kukhalenda elungile, ngaso sonke isikhathi, ngaphandle kokuthi bacwaninge kuma-spreadsheet.
Cela i-Chili Piper Demo
Ngemicimbi yeChili, kulula kubakhangisi bemicimbi ukuthi baqinisekise ukubhukha komhlangano wangaphambi komcimbi ongenamthungo wabathengisi abathengisayo, ukunikezwa okunembile nokuzenzakalelayo kwamathuba akhiqizwe kuleyo micimbi ethile, kanye nokuphathwa okungaxhunyiwe ku-inthanethi kokushintshwa kokuhlelwa kwesekhondi lokugcina nokutholakala kwegumbi.
Isimo 1: Imihlangano Yomcimbi Wangaphambi kokubhuka
Inkinga: Kuholela emcimbini, abathengisi abaningi bokuthengisa badinga ukuhlela ngesandla imihlangano yabo. Lokhu kusho ama-imeyili abuyela emuva nangaphezulu anethemba lokuzama ukuxhumanisa amakhalenda namagumbi okuhlangana. Sekukonke, lokhu kudala ithani lekhanda nokudideka kumphathi, ikhasimende, nomphathi womcimbi - umdlali obalulekile odinga ukuphatha amandla egumbi lokuhlangana futhi azi ukuthi kwenzekani emihlanganweni, nini. Yonke le nqubo ivame ukuphathwa kuspredishithi.
Isixazululo: Ngemicimbi yeChili, i-rep ngayinye inesixhumanisi sokubhukha esiyingqayizivele abangabelana ngaso namathemba ngaphambi kokwenza umcimbi nokuhlelela igumbi inqubo yokuchofoza okukodwa. Imihlangano ebibhukiwe iyangezwa nakwiKhalenda Lokungena - Ikhalenda elenziwe ngababili abaphathi bemicimbi abalisebenzisayo ukulandelela yonke imihlangano eyenzeka phansi emcimbini.
Isimo 2: Ukubikwa Komhlangano Wemicimbi kanye ne-ROI
Inkinga: Abaphathi Bemicimbi (nabo Abathengisi Bemicimbi) balwela ukulandela ngomhlangano imihlangano eSalesforce kanye nokufakazela umcimbi we-ROI. Ukulandelela yonke imihlangano engqungqutheleni kuyinqubo ebhukwana kakhulu yabaphathi bemicimbi. Kudingeka bajahe ama-reps okuthengisa, baphathe amakhalenda amaningi, futhi bagcine konke okuku-spreadsheet. Kukhona nezinqubo ezenziwa ngesandla zokungeza umhlangano ngamunye emkhankasweni womcimbi eSalesforce othatha isikhathi. Kepha konke kuyadingeka ukuze kufakazelwe i-ROI.
Isixazululo: Imicimbi yeChili ihlangana ngaphandle komthungo ne-Salesforce, ngakho-ke yonke imihlangano ebhukhiwe ilandelwa ngokuzenzekelayo ngaphansi komkhankaso womcimbi. Ikhalenda lethu Lokungena futhi lenza kube lula kubaphathi bemicimbi ukuthi balandelele imibukiso engekho futhi bavuselele abakhona emihlanganweni eSalesforce. Lokhu kwenza kube lula kakhulu ukubika nge-ROI yomcimbi futhi bagxile ekwenzeni umcimbi omkhulu.
I-Chili Inbox (okwamanje eku-beta yangasese)
Kumathimba enzuzo asebenzisa i-imeyili ukuxhumana namathemba namakhasimende, i-Chili Piper Inbox inikeza indlela elula, esebenza kahle, futhi ehlanganisiwe yokuthi amaqembu asebenze ngokubambisana okuningi, abonakale kudatha yamakhasimende, futhi ahlinzeke ngomuzwa wamakhasimende ongaxabani.
Isimo 1: Ukusebenzisana kwangaphakathi kwama-imeyili
Inkinga: Ukuthumela i-imeyili yangaphakathi kuyabheda, kuyadida, futhi kunzima ukuphatha. Ama-imeyili ayalahleka, kufanele uhlunge amakhulu ama-CC / Phambili, bese ugcina ukuxoxa ngawo ungaxhunyiwe ku-inthanethi noma engxoxweni lapho kungekho lutho olusemongweni futhi kungabhalwa lutho.
Isixazululo: Amazwana Ebhokisi Lemilayezo Engenayo - isici sokusebenzisana se-imeyili ngaphakathi kwe-Chili Inbox. Ngokufana nendlela osebenzisana ngayo ku-Google Amadokhumenti, isici sethu se-Inbox Comments sikuvumela ukuthi ugqamise umbhalo bese uqala izingxoxo namalungu eqembu lakho ngqo ebhokisini lakho lokungenayo. Lokhu kwenza kube lula ukuvula amalungu eqembu ukuthola impendulo, usizo, ukuvunywa, ukuqeqeshwa, nokuningi.
Isimo 2: Ukucinga imininingwane ye-akhawunti
Inkinga: Ukwazi ngempela ukuthi kwenzekeni nge-akhawunti ngaphambi kokuyizuza njengefa kuthatha amahora omsebenzi oyisidina ukusesha ngemisebenzi ye-Salesforce, ukubukeza imisebenzi kuthuluzi le-Sales Engagement, noma ukuhlunga ama-CC / Phambili ebhokisini lakho lokungenayo.
Isixazululo: Intelligence ye-Akhawunti - isici sobunhloli be-imeyili ngaphakathi kwe-Chili Inbox. Ngebhokisi lokungenayo leChili, uyakwazi ukufinyelela umlando we-imeyili obanzi weqembu kunoma iyiphi i-akhawunti. Isici sethu se-Akhawunti ye-Intelligence sikuvumela ukuthi ufinyelele ngokushesha kukho konke ukushintshaniswa kwe-imeyili nge-akhawunti ethile, konke kusuka ngaphakathi ebhokisini lakho lokungenayo. Lokhu kwenza kube lula ukufinyelela yonke i-imeyili ngomongo owudingayo.
Mayelana neChili Piper
Isungulwe ngo-2016, uChili Piper usohambweni lokwenza imihlangano kanye ne-imeyili isebenzisane kakhulu futhi ibambisane ngamabhizinisi.
I-Chili Piper igxile ekwenzeni izinqubo zasendulo ekuhleleni nasekuthumeleni i-imeyili okudala ukungqubuzana okungadingekile nokudilizwa enqubeni yokuthengisa - okuholela ekukhuleni komkhiqizo namazinga wokuguqulwa kuwo wonke umsele.
Ngokungafani nendlela yendabuko yokuphathwa kokuhola okungenayo, uChili Piper usebenzisa imithetho ehlakaniphile ukuze afaneleke futhi asabalalise imikhondo kubaphindi abalungile ngesikhathi sangempela. Isoftware yabo ibuye ivumele izinkampani ukuthi zisebenzise i-handoff ehola phambili kusuka ku-SDR iye ku-AE futhi babhukhe imihlangano kusuka kumikhankaso yokukhangisa nemicimbi ebukhoma. Njengoba amasayithi abo ebekwe ngokulandelayo ku-imeyili, uChili Piper usanda kumemezela i-Chili Inbox, ibhokisi lokungenayo lokusebenzisana lamaqembu wemali.
Izinkampani ezinjengeSikwele, iTwilio, i-QuickBooks Intuit, iSpotify, neForrester zisebenzisa uChili Piper ukwenza isipiliyoni esimangazayo sokuhola kwabo, bese kuthi bona, baguqule kabili inani lemikhombandlela libe yimihlangano ebanjiwe.
Tags: imihlangano yezincwadiChili imicimbiChili ibhokisi lokungenayoimihlangano ye-chilii-chili piperi-imeyili ezenzakalelayoG Suitegsuiteukuhlela okuhola kwangaphakathiukuhlela kwangaphakathiukunikezelwa kokuholaumzila womhlangano